Ngabe Imidiya Yezokuxhumana Isiguqula Sibe Ama-Psychopaths? | Martech Zone
Ngabe Imidiya Yezokuxhumana Isiguqula Sibe Ama-Psychopath?
NgoLwesihlanu, ngoJuni 14, i-2013 NgoLwesihlanu, ngoJuni 14, i-2013 Douglas Karr
Isikhathi sokuzijabulisa ngoLwesihlanu! Abantu abaningi ungilandele futhi awukuthandi amandla ami abuthuntu amaqhinga wokuxhumana nabantu online. Anginasiqiniseko sokuthi kukhona ongihlukanise njengo- I-psychopath esidlangalaleni noma cha, kepha mhlawumbe kunabantu abambalwa abazibuza. Angikholwa ukuthi ngikhona - kepha ngiyazithanda izingxoxo zami online. Ngize ngifuthelane kanye ngesikhashana - kepha ngisazama ukukhombisa inhlonipho ngemibono yabanye.
Umthelela wesikhathi eside wokuchitha impilo yakho emhlabeni wangempela ngenkathi uhlala uxhunywe kulowo obonakalayo awukaqondakali ngokugcwele. Ngenkathi ukwelashwa kokulutha nge-Intanethi kutholakala kusukela maphakathi neminyaka yama-90s, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi abantu abaningi kunanini ngaphambili babonisa izindlela zokuziphatha ezingezwani nezepilo manje ezihambisana nokuchitha isikhathi esiningi kakhulu ku-inthanethi. Ngabe Imidiya Yezokuxhumana Isiguqula Sibe Ama-Psychopath?
Umsuka womsebenzi wami ku-inthanethi iqiniso lokuthi ngisesidlangalaleni futhi ngisobala ekuzazeni kwami. Nginesibopho sokuphendula ezintweni engizisho ku-inthanethi ngoba ngifaka igama lami nesithombe sami kuso. Angenzi lutho ngingaziwa. Kuyinkolelo yami ukuthi okuningi kokuziphatha kwengqondo esikubona ku-inthanethi kungenxa yokuthi akukho miphumela kubantu abaxoshayo noma abanonya ku-inthanethi lapho befihla ngemuva kwengubo yokungaziwa. Angikholwa ukuthi abantu basho ukukhohlakala ku-inthanethi kunangaphambili.
Ukuncika Kwesu Lokukhangisa Elingenayo
Jun 19, 2013 ku-5: 09 PM
Lokhu kuyi-infographic enhle! Ngicabanga ukuthi kunembile impela. Isihloko esihle futhi.
Nov 3, 2013 ngo-4: 03 PM
AKUKHO lutho olwenza ezokuxhumana nabantu. Yilapho nje inkinga ibonakala khona kakhulu futhi lapho ulwazi lukuhlanganyela khona esifundweni. Kuhlangene KONKE nento yokuthi abaseMelika… ..BABONAKELE ngomsebenzi. Konke ezimpilweni zabo kuzungeza isici esithile somsebenzi, futhi bambalwa abathola amaholide. Lapho abantu bengatholi isikhathi esanele sokuchitha nezingane zabo (abaholi bethu BESIKHATHI njll) izingane azifundisi ukukhuluma ngezinto nabazali bazo. Abaningi abafundi yona kanye imizwa esihlukanisa nezilwane. Ngikubonile kuwo wonke amazinga engenayo. Abahola kakhulu bavame ukusebenza noma bengekho futhi bachitha isikhathi esincane kakhulu ukukhulisa isikweletu sentela, ngiqonde ukuthi ingane ***. Buza noma imuphi umzanyana noma i-au pair, kuyadabukisa, kepha kuyanengeka ngempela ngasikhathi sinye. Ngokuqondene nabahola kancane… .abaningi basebenza imisebenzi emibili njll ukuhlinzeka futhi futhi… ..izingane azikhuliswa ngendlela efanele. Kuyadabukisa nxazonke… ..ungalokothi uthi iJalimane njll ziyafana, zehluke KAKHULU uma kukhulunywa ngesikhathi sokuphumula somndeni (akusuye njalo umama), isikhathi seholide, njll. Kukhona indlela engcono yokusiza imindeni yethu. Ngifunda ama-athikili ngaso sonke isikhathi ngikhuluma ngokuthi amaMelika angabasebenzi abasebenza kakhulu kuphi… ..bese uye ezinsukwini zokusebenza ezingama-6 bese ukhulisa izingane zakho d !!!
Nov 3, 2013 ngo-7: 20 PM
Ngikholwa ukuthi ngingomunye wabantu baseMelika okhuluma ngabo @driventowin: disqus! Kodwa-ke, angivumelani nokuthi ngenze ukhetho ngomndeni OVER. Bengihlala ngenza bobabili futhi nginobuhlobo obuhle nezingane zami (bengingubaba ongayedwa). Angikholwa ukuthi kufanele unikele ngomunye ngenxa yomunye. Futhi angisoze ngabeka umndeni wami ekugcineni.
Nov 3, 2013 ngo-10: 58 PM
Kuyamangalisa ukuzwa umuntu, kunjalo ngempela. Ngibona imindeni eminingi kakhulu lapho wazi nje ukuthi ingumndeni b / c ifika ishiye ndawonye. Abanye bahlushwa izingcindezi zezomnotho kangangoba abakwazi ukujabulela impilo. Ngabe usethwe ngaphambi kokuba ube nezingane? Noma wenze konke ngemuva? Kulula kakhulu ukukwenza uma unezingane ngemuva, kepha kungenziwa.
Nov 4, 2013 ngo-10: 22 AM
Kwaze kwaba yilapho ngiqala ibhizinisi lami (nge $ 0 nendodana yami ukuqala ikolishi) lapho ngathola inkululeko yokuzihlanganisa ngokuphelele lezi zinto ezimbili! Ngikholwa ukuthi ngisebenza amahora amaningi kunowaseMelika ojwayelekile - kepha okuningi kungaphandle kwesikhathi somndeni kusuka phakathi kwamabili kuye ku-4AM 🙂